အရည်အသွေးမြင့် စိတ်တိုင်းကျ လက်ဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် Luxury Boutique Coated Paper Gift Shopping Bag အမှတ်တံဆိပ် ပုံနှိပ်စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ | လန်းဟိုင်း
အမှတ်တံဆိပ်လိုဂို လက်ဆောင်တံဆိပ်ပါ ဇိမ်ခံကားချပ် စက္ကူလက်ဆောင် စျေးဝယ်အိတ်
ပစ္စည်း- 150-250gsm coated paper (C1S, C2S)
အရွယ်အစား- 25*32*11cm/ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ကိုက်ညီရန် သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လက်ကိုင်- ဖဲကြိုးလက်ကိုင်၊ လိမ်ထားသောလက်ကိုင်၊ ပြားချပ်ချပ်စက္ကူလက်ကိုင်၊ သေသပ်လက်ကိုင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လက်ကိုင်
မျက်နှာပြင်အချောထည်- တောက်ပသော/Matt Lamination၊ ရွှေ/ငွေပူတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြယ်ခြင်း၊ သတ္တုပြားတံဆိပ်ရိုက်ခြင်း၊ Hologram Effect စသည်တို့။
ထုတ်ကုန်အမည် အမှတ်တံဆိပ်လိုဂို လက်ဆောင်တံဆိပ်ပါ ဇိမ်ခံကားချပ် စက္ကူလက်ဆောင် စျေးဝယ်အိတ်
ပစ္စည်း 150-250gsm coated paper (C1S၊ C2S)
အရွယ်အစား 25*32*11cm/ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ကိုက်ညီရန် သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကိုင်တွယ်ပါ။ ဖဲကြိုးလက်ကိုင်၊ လိမ်လက်ကိုင်၊ ပြားချပ်ချပ်စက္ကူလက်ကိုင်၊ သေသပ်လက်ကိုင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လက်ကိုင်
မျက်နှာပြင် အပြီးသတ် Glossy/Matt Lamination၊ Gold/Silver Hot Stamping၊ Embossing၊ UV Coating၊ Foil Stamping၊ Hologram Effect စသည်တို့။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ QC အဖွဲ့သည် ပစ္စည်း၊ တစ်ပိုင်းကုန်ချောနှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အဆင့်တိုင်းတွင် တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှု မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ယူဆောင်သွားခြင်း၊ လက်ဆောင်များ၊ အဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်၊ သကြားလုံး၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ မင်္ဂလာဆောင်များ၊ မွေးနေ့ပွဲများ၊ အလှကုန်များ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ စသည်ဖြင့် သင်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ပါ၊ သင်ဘာကို ဂရုစိုက်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ၊ သင့်အတွက် ဘယ်လိုမြှင့်တင်ချင်လဲ၊ သင့်စားသုံးသူအခြေခံအတွက် အမှတ်တံဆိပ်?
သင့်အကိုးအကားအတွက် ပုံမှန်အရွယ်အစားများ (အနံ * နက် * အမြင့်)
အရွယ်အစားငယ်(မီလီမီတာ) အလတ်စားအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အကြီးစားအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) အပိုကြီးမားသည့်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ)
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် 18kgs ထက်မပိုစေရ၊ Standard export ပုံး သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များအတိုင်း လိုအပ်ချက်
နမူနာ ၁)။ လက်နမူနာအချိန်- 2-3 ရက်အတွင်း။
၂)။ နမူနာ အခကြေးငွေ- နမူနာ အခမဲ့ (အမြန် အခကြေးငွေ လိုအပ်သည်)
၃)။ နမူနာပြန်အမ်းငွေ- ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
၄)။ နမူနာပေးပို့ပါ- TNT၊ UPS၊ FedEx၊ DHL Express မှတဆင့်
နမူနာပေးပို့ချိန် အရေအတွက်အရ 7-9 ရက်
အစုလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် 10-15days ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအလိုက်ပင်လယ်ပြင်ဆိပ်ကမ်း
ငွေပေးချေမှု T/T၊ Western Union၊ Credit Card၊ Paypal
3. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် မတူညီသော ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် စသည်တို့ပါရှိသော ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး။
4. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ 16 နှစ်ကျော်။
5. ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများနှင့် ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုများသည် ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့် လျင်မြန်စွာပေးပို့မှုကိုသေချာစေသည်။
ယခင်- စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်စူပါမားကတ်ကုန်စုံပရိုမိုးရှင်းဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ ယက်မသယ်သည့်အိတ်
နောက်တစ်ခု: စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Art Paper Shopping Black Paper Bag လက်ဆောင်